Global Voices teny Malagasy » Filohan’i Libanona? Eny, Tsia, Angamba…Atao Inona? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 10 Jona 2014 14:58 GMT 1	 · Mpanoratra Nada Akl Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Libanona, Mediam-bahoaka, Politika
Nanamarika ny fiafaran'ny fe-potoam-piasany tamin'ny 25 Mey 2014 teo taminy alalan'ity sioka ity ny filoha Libaney Michel Sleiman. Nanome tombatombana mahaliana sy amin'ny antsipirihany mikasika ny fe-potoana fiasany ny bilaogy politika Moulahazat .
Nanamarika takelam-pandokafana iray midera an'i Sleiman ao amin'ny arabe ny Beirut Report , ary nisafidy ny handinika mikasika ny lova napetrany ihany koa:
We live in fear of a presidential “vacuum” as if what we have now is optimal functionality? #Lebanon  #lebanonpresident2014 
Na dia izany aza, tao anatin'ny fahamatorana tanteraka ilay bilagera Elias Muhanna nanontany  raha mila filoha marina i Libanona :
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/06/10/60623/